दाङमा जहाजसहितको ड्रिमपार्क - ParyatanBazar.com
पर्यटन बजार३ फाल्गुन २०७५, शुक्रबार मा प्रकाशित
दाङमा हवाई जहाजसहितको ड्रिमपार्क निर्माण भइरहेको छ। झन्डै एक करोडको लागतमा घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १७ बेलभारका ड्रिम पार्क निर्माणको काम भइरहेको हो।हवाई जहाजसहितको ड्रिमपार्क निर्माणका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ग्राउन्डेड यति एयरको ३४ सिटे जहाँज ल्याइसकिएको छ।
उक्त जहाजलाई दुई वटा लरीमा राखेर पुस ५ गते दाङ ल्याइएको थियो। ल्याउँदा मात्रै सबै गरेर दुई लाख ४० हजार भाडा खर्च लागेको पार्क निर्माताले जानकारी दिएको छ। तर, ग्राउन्डेड प्लेनलाई कति तिरेर ल्याएको हो? भन्ने सवालमा भने उनले खुलाउन चाहेनन्। ‘आगामी वर्ष हुने नेपाल भ्रमण वर्षसम्म हाम्रो प्रोजेक्ट ३ करोड जतिको हुनेछ,’ उनले भने।
त्यो ड्रिमपार्क भित्र जानेले प्लेन चढेको अुनभव गर्न पाउन र नचढेकाले पनि त्यसको अनुभूति गर्न पाउन भन्ने उद्धेश्यले पार्क निर्माण गर्न लागिएको पार्कका परिकल्पनाकार शम्भु घिमिरेले बताए।घिमिरेले पार्क भित्र कृतिम हिमाल, कृतिम चिडियाखाना र जिट फ्लाई निर्माण गरिने जानकारी गराए।
जागिरमा पेन्सन भइसकेकाले भविस्यमा त्यसै बसेर समय विताउनुभन्दा केही गर्ने उद्धेश्यका साथ हवाई जहाजसहितको ड्रिम पार्क निर्माण गर्न लागिएको घिमिरेले बताए।
‘विद्यार्थीलाई पनि केही छुट हुनसक्छ, तर, जेष्ठ नागरिकलाई भने प्रवेश निःशुल्क गरिनेछ,’ उनले भने । ‘जहाजमा चढ्ने सपना सबैको हुन्छ,’ घिमिरेले भने, ‘त्यसैले यसको नाम पनि ड्रिम पार्क राखिएको हो।’
उनले जहाज चढ्न नपाएकाहरु त्यहाँ पुग्दा चढेकै महसुश गर्ने र चढेकाले त्यसको स्मरण गरून् भन्ने आफूहरूको उद्धेश्य रहेको बताए। जहाज सहितको नौंलो पार्क निर्माण गरिएका उनले यसले जिल्लाको पर्यटन प्रर्वद्धनमा टेवा पुग्ने आशा व्यक्त गरे।